« Izaho no mofon’aina, izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony. » ( Jao 6:35)
Ry havana malala, amin’izao alahady faharoa amin’ny Advento izao, dia manome antoka ho anao ny Tompo, amin’ny alalan’ny teniny fa hamonjy anao. Hoy mantsy Izy: “Izaho no mofon’aina, izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony.” I Jesoa tenany mihitsy no manome antoka ho antsika fa hamonjy antsika, ry havana. Ambarany aminao ary amin’ity anio ity fa:
I IZY NO MOFON’AINA
Hoy Jesoa: “Izaho no mofon’aina.” Tsy anganongano izany ry havana. Tena fanambaran’I Jesoa Kristy ny tenany amintsika mihitsy izany. Mety ho sarotra ny manakatra izany, tahaka ny nahazo ny sasany tamin’ireto Jiosy izay nihaino Azy ka nimonomonona, araka ny and.41:” dia nimonomonona tamin’I Jesoa ny Jiosy, satria Izy nanao hoe: Izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra”. Tsy nieritreritra afa-tsy ny ara-nofo ihany ireto Jiosy ireto. Ny hany fantany momba an’I Jesoa mantsy dia ny maha olona Azy fotsiny. Tsy manaiky ny fahatanterahan’ny teny fikasana ny amin’ny fahatongavan’I Mesia izy ireo.
Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny Fiandrasana an’ilay Mesia isika izao. Betsaka tokoa ny fampianaran-diso manohitra an’I Jesoa Kristy ho Andriamanitra. Mila mijoro isika mba hahazoan’ny hafa antoka ihany koa fa io ilay Mpamonjy. Amin’izao ihany koa dia ny fiainana ety an-tany no mahamaika ny olona. Ka lasa mitotototo esty sy eroa mitady izay hahasoa ity nofo ity ny maro. Raha ny fiainana ety an-tany ihany no mibahana ao an-tsainy, sarotra ny hahavoatoana azy handray ny famonjena. Ny hevitry ny teny hoe “mofo”, hevitra ara-panahy izany, dia I Jesoa ilay teny tonga nofo izay nidina avy tany an-danitra. Mahavelona Izy, noho izany: azo antoka fa tena tonga iray aina Aminy ny mino Azy ka hamoa be, araka ny teniny hoe :”… Izay miray Amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka Amiko kosa ianareo, dia tsy mahay na inona na inona.” (Jao 15:5)
II IZY NO TOKONY HOHATONINA!
Hoy I Jesoa: “izay manatona Ahy tsy mba ho noana”. Ny mahamaika sy ny mahaliana ny olona matetika dia ny sakafo ara-batana ihany. Marina fa ilaina izany amin’ny maha olombelona mitafy nofo antsika. Iza tokoa moa no sahy hilaza fa tsy mila sakafo ny nofo? Tsy ampy anefa raha izany ihany no ihazakazahantsika. Ilaina ihany koa ny famahanana ny fanahintsika mba ho tena olona voky ara-panahy, mba hahazoantsika fahasalamana ara-panahy sy ilay fiainana tsy mety levona nampanantenaina antsika. Aiza anefa no hahitana an’izany? Ny valiny dia ambarany ao amin’ny and 35b “izay manatona ahy tsy mba ho noana” I Jesoa Kristy tenany mihitsy no efa milaza amintsika io.Izy noho izany no afaka mamonjy ny fanahintsika. Manome antoka Izy fa ny zavatra tena sarobidy izay tena maha olona antsika mihitsy no iantohany ka hotanterahiny. Raha noana mantsy ny fanahintsika dia toy ny maty isika.
Ry havana, I Jesoa Krsity no mofo velona, Tenin’Andriamanitra, nidina avy tany an-danitra. Inona no mbola mampisalasala antsika? Manatona Azy mba hamahanany anao. Aza manalavitra ny Soratra Masina ianao, vakio isan’andro ny Baiboly, ataovy fiainana ny fanatanterahana izay lazainy. Raha izany no vitanao dia matokia fa voavonjy ny fanahinao. Fa hoy I Jesoa hoe: “ Izay rehetra manatona Ahy ka mandre ny teniko ka mankato azy, dia…Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ny vatolampy;…” (Lio 6:47-48)
III IZY NO TOKONY HINOANA!
Hoy I Jesoa: “ izay minoa Ahy tsy mba hangetaheta intsony”. Tsy hoe vitan’ny manatona Azy ka mihinana fotsiny, fa mila mino ihany koa ianao mba tena hahazo antoka fa ho voavonjy. Ny hoe “mino” dia midika hoe: misotro, mitelina, mandatsaka ao anaty. Izany hoe tahaka ny misotro rano ihany, ka raha tsy mitelina dia mbola hangetaheta foana. Noho izany dia ampidiro ao anatinao I Jesoa Kristy mba tsy hampangetaheta anao intsony. Alatsaho ao anatinao ny Teniny mba ho entinao mivelona ara-dalàna. Ny tsy fananana finoana no mahatonga ny olona mbola hitady zavatra hafa. Mangetaheta lava ny olona tsy manam-pinoana an’I Jesoa Kristy. Ambaran’ny Tompo ao amin’ny and.47 fa “… Izay mino no manana fiainana mandrakizay”. Ny finoana an’I Jesoa Kristy ihany izany no hahazoana antoka ny fiainana mandrakizay.
Ry havana malala ao amin’ny Tompo! Meteza ary hanaiky an’I Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy anao: Izy no manome aim-panahy anao, hâtony Izy mba hamahanany sakafom-panahy anao, ary minoa Azy fa Izy ihany no azo antoka hanome fiainana mandrakizay anao. Ary ho Azy irery ihany anie ny voninahitra. Amen!